जीवनशैली Archives - Daily State News
दयाहाङ पनि मान्दैनन् दसैं तर… काठमाडौं, ३१ असोज । आदिवासी जनजाति समुदाय दुई भागमा बिभाजित छन् दसैंको सन्दर्भमा, कोही दसैं मनाउछन् र कोही मनाउदैनन् । आदिवासीहरुको मौलिक चाड दसैं होइन भन्ने मत बलियो हुँदै आएको छ । र आदिवासीहरुले दसै छोड्दै गएका छन् सालन्य । आदिवासी समुदायका कलाकार दयाहाङ राई पनि दसैं मनाउदैनन् । […]
स्मार्टफोन, हत्केलाभरको यो प्रविधि अहिले अधिकांश नेपालीको खल्तीमा छ । अझ सायदै किशोर पुस्ता यस्ता होलान्, जसले स्मार्टफोन बोक्दैनन् । स्मार्टफोन अहिले कुराकानीको माध्याम मात्र बनेको छैन, मनोरञ्जनको साधन पनि । किशोर किशोरी यसैबाट फोटो खिच्छन्, भिडियो अपलोड गर्छन्, फेसबुक चलाउँछन्, स्टाग्राममा जोडिन्छन् । स्मार्टफोनकै कारण अहिले किशोर पुस्ता भर्चुअल संसारमा रमाउन थालेका छन् । तर, […]
ट्वान्टिसेभेन : द डेथ जोन यदि तपाईं गीत÷संगीतको पारखी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि ब्रायन जोन्स, जिमी हेन्ड्रिक्स, जेनिस जोप्लिन्, जिम मोरिसनजस्ता विश्वप्रसिद्ध गायकलाई सुन्नुभएको होला । तपाईंका मोबाइलमा बेलाबेला उनीहरूका गीत बज्छन् होला । कहिलेकाहीँ उनीहरूको लोभै लाग्ने स्वर सुनेर दिन कटाउनु हुन्छ होला । एउटा संयोग मान्नुपर्छ, माथि उल्लेख गरिएका चारै गायकको मृत्यु २७ […]
आँगनीमै छ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन। विभिन्न पार्टीका झन्डाहरू जताततै फहराइरहेका छन्। गाउँघरमा नेताहरू दुई हात जोड्दै घरदैलोेमा छन्। उम्मेदवारहरूले कतैकतै त कामै सघाइदिएको सुनिन्छ। कसले जित्ला र कसले हार्ला, बहुमत आउला कि नआउला, को कहाँ कमजोर छ, को खराब, को सही छ जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मतदाताहरू अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। यस्तो चुनावी माहोलमा कोही […]
महिलाले भित्री बस्त्र खरिद गर्दा ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु
महिला, खासगरी युवतीहरु पहिरनमा निकै सचेत हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो शरीर सुहाउँदो पहिरन मात्र खोज्दैनन्, त्यसको कलर कम्बिनेसन पनि मिलाउँछन् । यद्यपी भित्री बस्त्रको सन्दर्भमा भने उति संवेदनसिल नहुन सक्छन् । भित्री बस्त्र जस्तो सुकै भएपनि कसले देख्छ र ? भन्ने लाग्छ । तर, यो गलत धारणा हो । बाहिरी वस्त्र जति महत्वपूर्ण छ भित्री […]
डा. निलमको ‘जेनेटिक जिन्दगी’: आफू खान्छिन् पेनकिलर, छोरालाई आयुर्वेदिक
काठमाडौं । आकाशमा उदाएको चन्द्रमालाई एउटा कविको आँखाले प्रकृतिको सुन्दर रचना देख्ला । एउटा प्रेमिको नजरबाट प्रेमिकाको सौन्दर्य देख्ला । अनि, एउटा भोकोले त्यसमा रोटीको बिम्ब देख्ला । ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ भनेझैं एउटा चिकित्सकको आँखामा पनि रोग र विरामी नै संसार हुँदा रहेछन् । पाँच वर्षदेखि जेनेटिक विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत डा. निलम कुँवर ठाकुरसँग […]
जसको सपना १६ पटकसम्म रेडियो नेपालको स्वर परीक्षामा ‘असफल’ हुँदासमेत मरेन
काठमाडौं, कात्तिक १८ । अनामनगरको गल्ली छिचोल्दै म्युजिक बैंक आइपुगिन् विमला लामा थिङ । प्लास्टिकको बैजनी चप्पल ढोकाबाहिर खोलेर ६७ वर्षीया उनी स्टुडियोभित्र पसिन्– गीत रेकर्ड गराउन । विमला ती गायिका हुन्, जसको सपना १६ पटकसम्म रेडियो नेपालको स्वर परीक्षामा ‘असफल’ हुँदासमेत मरेन । ‘मेरो गीत आज रेकर्ड होला त बाबु ?’ रेकर्डिङमा व्यस्त कृष्ण […]
पत्नीलाई शितल छहारी दिन मनोजराजलाई सल्लाह २९ असोज, काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्त यतिबेला ‘सिंगल’ छिन् । तर, उनले आफूलाई कहिल्यै सिंगल महशुस गरेकी छैनन् । कार्यक्रमका लागि जहाँ जान्छिन्, स-परिवार पुग्छिन् । गायक मनोजराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि अञ्जुसमक्ष विवाहका धेरै प्रस्ताव आए । तर, अब उनी पुनः विवाहको पक्षमा छैनन् ।कार्यक्रम आयोजकलाई पहिल्यै भन्छिन्, ‘मलाई […]
७५ बर्षमा पनि कसरी आकर्षक र जवान छन् उनी ?
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले जीवनमा भयानक उतार-चढाव झेले । कहिले उनी मृत्युसँग जुधे, कहिले आर्थिक अभावसँग । फिल्म छायांकनको क्रममा घाइते भएका उनी फेरी बाँच्छन् भनेर चिकित्सक स्वंम ढुक्क थिएनन् । तर, चमत्कार भयो । उनी बाँचे । कुनैबेला उनी आर्थिक रुपले यति टाट पल्टिएका थिए, त्यो कुनै खराब सपना जस्तै थियो । कतिसम्म भने, […]